Ogaden News Agency (ONA) – Itoobiya oo Noqotay Wadanka Daynta Ugu Badan Laguleeyahay Aduunka.
Itoobiya oo Noqotay Wadanka Daynta Ugu Badan Laguleeyahay Aduunka.
Baashitaan lasameeyay ayaa lagu ogaaday in wadanka Itoobiya uu yahay wadanka daynta ugu badan lagu leeyahay caalamka, baadhitaankan ayaa lagu ogaaday in wadanka Itoobiya uu yahay wadanka koobaad ee lagu leeyahay lacag dayn ah.
Baadhitaanka ayaa lagu sooban dhigay 10 ka wadan ee caalamka daynta ugu badan lagu leeyahay waxaana kaalinta 1aad galay wadanka gumaysiga Itoobiya oo kamid ah wadamada aduunka ugu liita dhinaca maamul wanaaga.
Arintan ayaa deeq bixiye yaasha fajac iyo amakaag kuriday iyadoo wadanka Itoobiya uu yahay wadanka deeqda ugu badan lasiiyo aduunka waxayna deeq bixiye yaashu layaabeen halka ay marto lacagaha kaashka ah iyo deeqda cuntada ah ee ay Itoobiya siiyaan.
Dhinaca kale dadka shacabka ah ee kunool Itoobiya ayaa ah dadka ugu nolosha xun wadamada caalamka xataa wadamada burburay waxaana wadanka Itoobiya hada ay macaluul haysaa 20 milyan oo shacab ah.
Sidoo kale wadanka Ogadenia ee gacanta gumaysiga kujira ayaa hada maraya marxalad biyo iyo baad la’aan ah waxaana wadanka Ogadenia gaajo iyo oon ugu dhintay inta la ogyahay 5 qof oo shacab ah halka xooluhuna ay bilo kahor dhimasho bilaabeen.
Dhinaca kale maamulka maqaarsaarka ah ee Tigreegu Jigjiga kasamaysteen ayaa kumashquulsan dacaayado been ah iyo aroosyo lagu baabi’inayo hanti aad ubadan oo shacabka wax tari lahayd.
Iskusoo wada duub oo arimahan ayaa loo eersanayaa maamul xumo kajirta guud ahaan wadanka Itoobiya iyo hantida qaranka oo kudhacda jeebka dadyar oo hogaaminta wayaanaha ah.